Waa maxay qorshooyinka midabada xafiiska ganacsiga ugu wanaagsan? – RGB Color Picker
Waa maxay qorshooyinka midabada xafiiska ganacsiga ugu wanaagsan?
Midabada xafiiskaaga ayaa dhammayn kara wax ka badan sidii ay u soo jiidi lahayd! Qorshayaasha ruxitaankaaga xaaladaadu waxay kabaayaan sawirkaaga sidoo kale waxay si weyn u saameeyaan faa iidada shaqaalaha, dhiiri gelinta iyo maskaxda maskaxda badan. Tixgeli qaabkan si aad u caawiso in lagu garto xaalada xafiiskaaga waqti dheer oo soo socda.
Ultra violet: Ku dhawaaq ku samee midabka sanadka ee ‘Pantone’s The Year’ oo ah ‘violet’ aad u daran. Ka fikir hooska rabbaaniga ah ee guduudka ah, waa mid qallafsan, cajiib ah, oo qol kasta u keenaya dareen ah hubaal iyo muhiimad. Iyada oo aan loo eegin in booskaagu yahay mid aan fiicnayn ama qurux badan, hadhkani waa mid is bedbeddela oo ku habboon oo la tegi kara qorshe kasta oo xiirashada ah isla markaana waxaa loo adeegsan karaa kala-soocidda qaybo go’an.
Aagagga Joogtada ah: Iyada oo la adeegsanayo qorshe loo yaqaan ‘biophilic plan’, oo ah hannaan horumarineed oo ku biiraaya qeybo ka mid ah adduunka caadiga ah marka loo eego gogol xaarka isku-imaatinka, waa wax aan la fileynin in taajir, codad dabiici ah laga helo meelo isku-dhafan oo xafiisyo ah. Markaad ku darto cagaar leh mish-mash guud, waxaad sameyn kartaa xaalad debecsi ah oo u oggolaanaysa shaqaalaha inay ku sii nagaadaan hawlgal ahaan iyo wax ku ool ah muddada maalinta. Waxoogaa yar oo midab leh iyo midab madow leh oo u dhigma buluug qabow ayaa aad ugu sii gudbi kara sameynta deegaan, casri ah.
Qarniyadii Xasaasiga ahaa: Shakhsiyaadka iyo ururadu waxay qaadanayaan dariiqa nolosha ee dhexdhexaadka ah, iyo sidoo kale qaababka hoos u dhaca! Midabada aasaasiga ah, midabada aamusnaanta leh, ee la mid ah jajabka bacaadka leh iyo luul mugdi ah, iska kaashada si aad u sameyso goyn go’an, xaalad xasilloon oo horumarisa soo nooleynta iyo horumarka.
Mugdi waa Soo Noqday: Qaar badan ayaa ka fogaaday inay mugdi ku isticmaalaan qaab dhismeedkooda, si kastaba ha noqotee qolalka-mugdiga ah dhammaantood waxay ku jiraan dib-u-soo-kabashada. Xaraashka waxaa loo arkaa inay tahay mid daruuri u ah iftiinka dhabta ah ee ay ku dheehan tahay ee ku habboon waxyaabaha kala duwan, tusaalooyinka, iyo alaabada. Dabaqa ilaa saqafka, mugdiga ayaa ka dhigi kara jawiga shaqo inuu u ekaado mid siman, xirfad leh isla markaana ahmiyad leh.
Midabbada aadka u adag illaa hooska iftiinka gaaban, qaab-sannadeedka hadda jira wuxuu ka dhigi karaa xiriirkaaga inuu sii xirnaado iyadoo la hagaajinayo faa’iidada iyo kor u qaadista gobollada maskaxda! Deegaanada Xafiiska Ganacsiga, kuma biirin karno qayb kamida midabada cusub ee midabaynta wali waxaa sii dheer kuwa ku habboon muuqaalkaaga. Iyada oo aan loo eegin inaad u baahatid inaad wax ku kala firdhi on qeybiyeyaasha ama aad ku dartid korodhsiyo aad u fiican oo aan ku go’aamineyno qaab dhismeedka iyo daboollaha qeybiyeyaasha, waxaa muhiim ah inaad ka dhigto mid ka mid ah urur wanaagsan oo tusaalooyin ah, alaab ah, iyo gaar ahaan shaandhaynta.
Midabyadu mid walba oo inaga mid ah ayay saameeyaan. Waxay qof walba gaarsiiyaan (dareenka guud ahaan) iyo dareenka qof walba. La yaab ma leh in ururada iyo kuwa wax sameyaa ay ku isticmaalayaan cabiro lacag caddaan ah si ay u helaan midabada saxda ah ee alaabtooda iyo dukaanadooda. Sameynta dammaanad-qaadku wuxuu macaamiisha ugu sii nagaan doonaa dukaamadaas, si kasta oo ay aad uga sii daranna, wax ka iibsan karaan. Si la mid ah, fikradaha xafiisyada saxda ah ee fekerka leh iyo midabada xafiiska ee si hufan loo soo xushay waxay gacan ka geysan karaan “soo dhaweynta, dhiirrigelinta iyo dhiirrigelinta” dhulka. Tani, sidaas darteed, waxay gacan ka geysan kartaa kordhinta waxtarka iyo kor u qaadista heshiisyada.
Baadhitaan badan ayaa laga bixiyay saamaynta midabyada khafiifka ah ee xafiiska mid ka mid ah shaqooyinka xafiiska caadiga ah sida duubista, tafatirka, soo qaadashada taleefanka, duubista iyo wixii la mid ah. Baadhitaannada ayaa sidoo kale la faray si loo arko saamaynta fikradaha xafiisku ku ruxayo fikradaha barwaaqada, hufnaanta, fulinta iyo fulinta. Ujeedada mid kasta oo ka mid ah baaritaanadaani waa in la helo midabada xafiiska midabada ugu wanaagsan iyo qorshooyinka hagaajin kara barnaamika gaarka ah iyo fulinta gaar ahaan gudaha xafiisyada xaddidan. Baadhitaan kastaa wuxuu muujiyey xiriir ka dhexeeya cadhada shaqaaluhu iyo fikradaha xafiisyada laga xayuubiyey.
Halkan waxaa ku yaal dhowr naseexooyin oo ka yimid hal-abuurka sayidka iyo daaweyn-yaqaanada xallinta qulqulka midabada rinjiga ee saxda ah.
Tixgeli ganacsiga – Qorshayaasha midab-nuucyada dhexdhexaadnimadu waxay aad ugu habboon yihiin ururada dhabta ah. Taas ayaa la sheegayaa, dadka deggan qolalka goobta shaqada waxay sidoo kale go’aansan doonaan goobta midabada midabada goobta shaqada ay kuxirantahay dabeecaddooda. Dhacdada aad jeceshahay inaad uga gudubto dareen ah muhiim u ah qaabdhismeedka muuqaalka leh, dooro midab diiran oo jilicsan sida jaalle, oranji iyo wixii la mid ah adigoo tixgelinaya inay yihiin kuwa aan awood badan lahayn. Khabiirada Feng Shui ee khabiirrada qaybta badankood waxay soo jeediyaan hooska khafiifka ah ee jaalaha ah goobaha shaqada maadaama kuwani ay waxtar u leeyihiin aqoonta iyo arrimaha la xiriira macluumaadka. Dhibaatooyinka aamusnaanta, khubaradu waxay soo jeedinayaan hooska sida buluug-cagaaran iyo wixii la mid ah. Goobaha shaqada ee ay adeegsadaan qorsheeyeyaasha, qorayaasha iyo wixii la mid ah, qofku wuxuu ka soo qaadan karaa hadhka sida jaalaha, oranjiga iyo casaanka. Khabiirrada, isticmaalka timaha aamusnaanta, daahyada iyo buundooyinka ayaa gacan ka geysta dib-u-dhiska maskaxda oo weliba ka caawinta hagaajinta. Midabada qaboobaha sida buluugga iyo cagaarka waxaa loo maleynayaa inay ka xanaaqaan shaqooyinka sida kuwa lataliyaha sharciga, buug-hayaha iyo wixii la mid ah maadaama kaalmadan ay dhiirrigeliso feejignaanta iyo aamusnaanta.
Tixgeli helida qolka Wixii banaan xafiisyada yar-yar, qofku wuxuu dooran karaa midabyo xafiisyo leh sida midab cad, beige iyo wixii la mid ah gaar ahaan saqafyada madaama tani ay ka caawin karto sameynta khiyaanka qolka weyn. Dhanka kale, midabada mugdiga ah waxay kufiican yihiin qolalka xafiisyada waaweyn maxaa yeelay kuwan ayaa qolka ka dhigi kara mid sii yaraanaya oo deggan.
Fiira gaar ah u yeelidda ruxeynta daweynta daaweeyeyaasha midabka sida Angela Wright waxay intaa ku dartay inay ka walwalaan gelitaanka shaxanka iyadoo ay ka soo horjeedo in si fudud loo xirto lafteeda. Tan macnaheedu waa xoogga shaandhayntu waa qodobka in qaybta ugu badan ay saameyn ku leedahay dilalka shaqaalaha oo ay fuliyaan halkii ay lafteeda lafteeda. Dhinacyadan, xarkaha adag oo qurxoon ayaa xoog badanaya halka guntin ka fudud oo hoos udhaca ahi uu degi doono.
Ka warbixi xayeysiintaan
Waqtiga xaadirka ah aan oggolaanno inaan baranno qaar ka mid ah fikradaha xiisaha leh ee xafiisyada sida ay ku taliyeen Angela Wright iyo sida ay nooga weeciyaan:
Buluugga wuxuu xoojiyaa Mind – Angela Wright waxay kugula talineysaa inaad u isticmaasho buluug goobaha shaqada ee ay ku lug leeyihiin shaqaalaha buugta keydka ah ama khubaro kaladuwan oo ubaahan inay qabtaan shaqo maskax badan. Angela xaalad kasta, waxay sidoo kale soo jeedineysaa isticmaalka buluug leh rusheeynta oranjiga si ay uga caawiso isu dheellitirka shaqada maskaxda iyo ku darista taabashada dareenka qaabka.
Jaalaha wuxuu xoojiyaa shucuurta – Shaxdan macangagnimada leh waxay u sameyneysaa midabyo xafiisyo fiican leh madaama ay kicineyso damiirka sida nafta. Waxay kufiican tahay farsamayaqaannada iyo dhulal kaladuwan oo hal abuurnimo looga baahan yahay.
Cagaarka waxaa loogu talagalay Balance – U isticmaal cagaar xafiiskaaga fikirrada xiirashada gaar ahaan meesha lacagtu ay marwalba isku beddeli doonto gacmaha mar kasta iyo mar labaad. Cagaaran wuxuu keenaa isleeg, xasillooni iyo qalbiqaboojin.
Saameynta cas ee Jirka-cas wuxuu muujiyaa tayada jirka iyo casriyeynta. Waxay kufiican tahay xarumaha wax lagu qoro, goobaha shaqada halkaasoo shaqaalaha ku meelgaarka ah iyo horumariyayaashu ka shaqeeyaan ama ay la kulmaan macaamiisha iyo meelo kaladuwan oo qofku u baahan karo bey’ad bulsho ama jawi ku habboon.
Waxyaabaha mudnaanta leh ee diirada lagu saarayo marka la dooranayo xafiiskaaga midabada midabada
Majiraan midabyo midab xafiis oo bannaanka ka ah Waa habka aad u isticmaasho.
Xullo qeybta aad ubaahantahay midabada aad saameyn ku yeelan karto: Maanka / Jirka / isku dheelitirka / dareenka.
Xulo hadh gaar ah ka dibna dooro sida si gaar ah ama qiiro leh u qoysay aad ugu baahan tahay inay ahaato.
Midabada looma helo keli keli ahaanshahooda Waxay sifiican u shaqeeyaan markii ay ka kooban yihiin midabbo kaladuwan.
Kuwani waa dhowr midab oo midabood leh oo midab leh xafiisyo xafiisyo ah iyo fikradaha xariifka ah ee xafiiska oo aad ku taageeri karto ruuxa shaqaalaha ah isla markaana hagaajin kara heshiisyadaada.